Ndagwurugwu 10 kacha mkpa n'ụwa | Akụkọ Njem
Monica sanchez | | Ebe njegharị, General, Nduzi
M hụrụ ndagwurugwu n'anya. Ha bụ ihe ngosipụta eke dị adị ebe ị nwere ike ịdị n'otu zuru oke na gburugburu ebe obibi: ị toa ntị na ụda nke ebe ahụ, na-eku ume ikuku dị ọcha ma na-adị ọcha, na mgbe niile na igwefoto gị ị na-ejide akụkụ kachasị iche, ndị na-eme ka ị maa jijiji na mmetụta.
Dị ka enwere ọtụtụ ma ọ dị nwute na anyị nwere naanị otu ndụ iji leta ha niile, aga m agwa gị nke bụ ndagwurugwu kacha mkpa n’ụwa.
1 Ndagwurugwu Incles
2 Ndagwurugwu Loire
3 Ndagwurugwu Porsmork
4 Nnukwu Ndagwurugwu Rift
5 Ndagwurugwu Eze
6 ncheta Valley
7 Ndagwurugwu Yosemite
8 Ndagwurugwu ọnwụ
9 Ndagwurugwu Waipi'o
10 Ndagwurugwu Danum
Anyị ga-amalite njem anyị site na ịga na nke kachasị anyị nso, na Andorra. Ndagwurugwu Incles, megidere ihe ọ nwere ike iyi, na-anabata onye ọ bụla chọrọ ịrịgo ugwu ya ma ọ bụ ịsa ahụ na mmiri ya. Accessnweta ebe ahụ ọ dịghị mkpa inwe nnukwu nkwadebe anụ ahụ, yabụ, ọ bụ ebe zuru oke maka ụmụaka nwere ike ịchọta marmot ma ọ bụ chamois.
Emi odude ke France, ẹkot enye ke akpa oro asatde ke mben kpukpru ikpehe: Loire. Ha bụ ala a gọziri agọzi, ebe ọ bụ mpaghara mmanya. N'akụkụ a nke ụwa ị nwere ike ịhụ otu ụlọ nke French, dị ka Saint-Brisson ma ọ bụ Clos-Lucé, ha nile wuru n'oge French Renaissance.
Ọ bụrụ n ’ị rọọ nrọ ileta ma nwee ike ịsa ahụ na geyser ... mgbe ahụ ị gaghị echefu ndagwurugwu Porsmork, na Iceland. N’ezie, kpachara anya n’ihi na o nwere ala nwere ezigbo okwute. Ma odida obodo dị egwu, ya mere, ọ bara ezigbo uru.
Nnukwu Ndagwurugwu Rift
N’Africa anyị na-ahụ Nnukwu Ndagwurugwu Rift, nke nwere ndọtị nke kilomita 4830. Ọ na-enyefe ókèala nke mba dị iche iche, site na Djibouti na Mozambique. Ọ bụ ebe ị ga-aga lee anụmanụ ise kachasị ukwuu n'Africa: ọdụm, agụ owuru, enyí, na rhinoceros na atụ. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ọ bụkwa ebe obibi nke ndị nna nna anyị. N’ezie, achọtara ihe izizi hominin mbụ ebe a.
Anyị na-aga n'ihu n'Africa, oge a na Ndagwurugwu Ndị Eze. Ọ bụ n'ezie necropolis nke dị nso na Luxor. N’ebe a ka ndị Fero nke usoro ndị eze 1922, 1979 na nke XNUMX zuru ike. Nke a bụ ebe Howard Carter chọtara ili Tutankhamun na XNUMX, na iri afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, na XNUMX, e kwupụtara na ọ bụ Ebe Ihe Nketa Worldwa.
Ugbu a, anyị ga-efe ụgbọelu wee gawa n’ókè ndịda Utah na Arizona, na United States of America. N'ebe a, obughi osisi ka ndi ozo bu, ha abughi ndi anumanu, kama ha bu ihe okike. Fọdụ ihe osise a kpụrụ akpụ site na ifufe, nke malitere ịba ọtụtụ nde afọ gara aga wee rue taa na-aga n'ihu na-agbanwe ọrụ ha. O doro anya na mgbe ị na-aga, ọ ga-amara gị nke ọma site n'ịhụ ya na fim ọdịda anyanwụ.
Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma ị nwere ike ịchọta na United States. Ndagwurugwu Yosemite bụ ndagwurugwu glacial Californian nke oke ohia na ugwu gbara ya gburugburu, nke site na ụzọ kpuchie na-acha ọcha n'oge oyi ọ bụla. A na-ahụta ya dị ka Ihe Nketa Worldwa, ebe ọ bụ na 1984, n'ihi na ọ bụrụ na ịga ije n'okporo ámá California ị chọrọ ihe dị jụụ ... Eji m n’aka na ọ gaghị esiri gị ike ịkwụpụ n'ebe a magburu onwe ya.
Anyị na-aga n'ihu na California, na-eleta otu ndagwurugwu dị ihe dị ka kilomita 225 n'ogologo na kilomita 8 ruo 24 n'obosara. Okwesighi maka ndi na anaghi anabata otutu oke, dika Mercury kariri 45ºC. N'ezie, n'ime narị afọ gara aga, edebara aha okpomọkụ nke 56ºC aha, kpọmkwem na July 7, 10. Yabụ ọ bụrụ na ị nwaa ịga, echefula iweta mmiri, sunscreen na okpu.
Mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga otu akụkụ nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ karị, ka anyị gaa Hawaii. Ndagwurugwu Waipi'o (mgbe ụfọdụ a na-akpọkwa Waipio) dị na mpaghara Hamakua, na nnukwu agwaetiti agwaetiti. Kpuchie a na-emekarị ebe okpomọkụ agwa na saa site crystal mmiri doro anya na kpọọ igwu mmiri. Ma echefula nche anwụ, ebe ọ bụ na mmiri ozuzo na-adịkarị na mpaghara a.
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ ụwa n'anya ma chọọ ịhụ oke ọhịa ebe ụmụ mmadụ ahapụghị ọtụtụ akara, oge eruola ka anyị gaa Borneo, ebe anyị ga-akwụsị njem anyị. Ndagwurugwu a mara mma dị na 83km n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke Lahad Datu. N’ime oke ohia nke kpuchiri 440km2 ihe karịrị 250 ụdị nnụnụ dị iche iche, panthers igwe ojii mara mma, macaques na orangutans, N'etiti ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ na okike dịka ọ dịtụbeghị.
Njem ahụ masịrị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Kedu ndagwurugwu kachasị mkpa n'ụwa?
A na m atụ uche gị Tafí site na ndagwurugwu dị na Argentina, n'ógbè tucumán. Ọ bụ ndagwurugwu nke abụọ kachasị elu n'ụwa, ọ ga-abụ nke kachasị ukwuu ma ọ bụrụ na ha wepụta pelao nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'etiti ndagwurugwu ahụ. Ọ bụkwa otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya dị na mpaghara ahụ!
Mkpụrụedemede Njem (II)